4 Ihe na-eme mgbe ị na ihichapụ Mkpa Data si gị New iPhone 7 / 7S
Mmadụ na mberede ihichapụ dị mkpa faịlụ na gị iPhone nwere ike ịbụ a na-akụda mmụọ nke karịsịa mgbe ị na-enweghị echiche ihe na-eme iji nweta ya azụ. Ndị na-esonụ anọ nzọụkwụ ngwọta ga-enwe ike inyere gị aka gị mkpa data mfe.
1. Kwụsị Iji iPhone7 / iPhone 7S
Ihe mbụ i kwesịrị ime na oge ị na-achọpụta na i furu efu mkpa data bụ na ozugbo kwụsị iji gị iPhone. Isi ihe mere na ị chọrọ ịkwụsị iji gị iPhone 7 ozugbo bụ n'ihi na ị na-achọghị ọhụrụ data site na overwrite furu efu data. Ọ bụrụ na a na-eme, ọ pụrụ ịbụ-agaghị ekwe omume naghachi furu efu data.
2. Lelee gị iTunes ndabere ọdịnaya ịhụ ma ọ bụrụ na data bụ n'ebe
The nzọụkwụ ọzọ bụ ego gị iTunes ndabere ka ahụ ma ọ bụrụ nke furu efu data bụ n'ebe ahụ. Isi nsogbu ị na-aga na-ezute n'ebe a bụ na Apple adịghị ekwe ka ị na-ele data na bụ na gị na iTunes ndabere. I nwere ike ikpebi iji weghachi niile data na olileanya na nke furu efu data ga-ahụ ma anyị ga adọ aka ná ntị na ị na nke a aga ga-abụ na ihichapu ihe niile na gị iPhone 7/7 gbakwunyere.
Luckily, e nwere ihe ngwa nwere ekwe ka ị na-ele faịlụ gị iTunes ndabere. Wondershare Dr. Fone-enye gị ohere iji nweta ihe ọmụma zuru ezu ndepụta niile data dị na gị iTunes azụ elu. Ụfọdụ n'ime atụmatụ nke Wondershare Dr. Fone ị ga-ahụ bara uru na-agụnye:
Enye gị ohere iji naghachi niile data gụnyere ehichapụ ozi, kọntaktị, photos, videos na ndị ọzọ na faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ
Ọ dị mfe iji dị ka anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị
Enye gị ohere ịhọrọ nke faịlụ na ị ga-amasị naghachi
Nwere ike idozi sistemụ gị iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1: anya isi na ị ibudatara na arụnyere Dr. Fone gị na kọmputa, na-agba ọsọ usoro ihe omume. Pịa "naputa site na iTunes." The ngwa ga-chọpụta niile nke dị ndabere faịlụ i nwere. Pịa na onye ị chọrọ dabeere na ụbọchị ya na e kere. Ọ bụ ezigbo ịhọrọ ikpeazụ ndabere tupu ị furu efu gị data.
Nzọụkwụ 2: Họrọ iTunes ndabere faịlụ na yiri ka nwere gị furu efu data wee pịa on "Malite iṅomi." The scanning usoro m na-a mgbe otú enwe ndidi.
The ndabere faịlụ a ga-amịpụtara na ndị niile data egosipụta na edemede. Ị nwere ike mgbe ego ma data ị kwụsịrị bụ na faịlụ.
3. I nwekwara ike Lelee ma gị Data dị gị iCloud ndabere
Ị nwekwara ike ego ọ bụrụ na gị data dị n'ime gị iCloud ndabere faịlụ. Ihe bụ nsogbu bụ, ọ bụ nnọọ ike ele ndị niile na data na gị iCloud azụ elu na ọzọ ma ọ bụrụ na ị gbalịa iji weghachi na atụ anya na ọ bụ ihe niile n'ebe, i nwere ike ihichapu niile data gị iPhone.
Wondershare Dr. Fone pụrụ inyere gị aka anya n'ime gị iCloud ndabere ịchọta gị data. Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ ime otú ahụ.
Nzọụkwụ 1: mgbe na-agba ọsọ Dr. Fone, họrọ "naputa site na iCloud ndabere faịlụ." Ị ga-kpaliri ịbanye gị iCloud na aha njirimara na paswọọdụ dị ka oyiyi n'okpuru na-egosi.
Nzọụkwụ 2: ozugbo ị na-ite na, ị ga-enwe ike ịhụ gị niile iCloud ndabere faịlụ. Họrọ onye ị na-eche pụrụ ịba gị ehichapụ data na pịa "Download."
Nzọụkwụ 3: A popup window ga-apụta na-egosi gị niile data dị na iCloud ndabere faịlụ gị ebudatara. Họrọ ụdị nke faịlụ ị ga-achọ iṅomi. Faịlụ ị na-ahọrọ ga-adabere na ụdị data ị furu efu. Ihe atụ ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị ozi, ị ga-họrọ "ozi na oku na ndekọ."
Nzọụkwụ 4: Ozugbo Doppler bụ zuru ezu, ị ga-enwe ike ịhụ ihe niile data ke otu na ị nwere ike mfe ego ọ bụrụ na gị furu efu data dị n'etiti ha.
4. agbake ehichapụ Data
O doro anya na ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ na-ehichapụ data na ma gị iTunes nke iCloud ndabere, ị nwere ike mfe weghachi faịlụ na mmadụ nile ga-ọma. Ọ bụrụ na ị nwere ike Otú ọ dị ịchọta data on ọ bụla nke gị backups, ị ka pụrụ agbake data iji Wondershare Dr. Fone. A bụ otú.
Nzọụkwụ 1: Gbaa Wondershare Dr. Fone na jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa. Ngwa ga-chọpụta na ekwentị gị. Họrọ "naputa site na iOS Ngwaọrụ" Pịa na Malite iṅomi.
Nzọụkwụ 2: Dr. Fone ga iṅomi ngwaọrụ gị. Usoro nwere ike iri oge ụfọdụ ya biko-enwe ndidi.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo Doppler zuru ezu, gị niile data ga-edepụtara ke edemede. Ebe i nwere ike ihuchalu data na-ekpebi ihe ị ga-achọ naghachi. I nwekwara ike iyo nsonaazụ na-egosipụta nanị ehichapụ ọdịnaya site na-ahọpụta "Naanị gosipụta ehichapụ ihe."
Ozugbo ị na-ahụ na-ehichapụ faịlụ, dị nnọọ pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Olee otú naghachi ma ọ bụ hichapụ rụrụ arụ faịlụ kpam kpam site na kọmputa gị
> Resource> Naghachi> 4 ihe na-eme Mgbe Ị Hichapụ Mkpa Data si gị New iPhone 7 / 7S